Barracuda Championship Championship Tournament on Tournament PGA
Xaqiiqooyinka, tirooyinka, tartanka iyo dhammaan kuwa ku guuleysta tartanka kubbadda cagta
Tartanka Barracuda wuxuu qayb ka ahaa jadwalka PGA Tour tan iyo 1999-kii. Taariikhdaas waxaa loo yaqaan 'Reno-Tahoe Open', laakiin Barracuda Networks Inc. ayaa noqotay shirkad madaxbannaan oo bilowdey 2014. Tartankan haatan waa " ka soo horjeeda "dhacdo - mid ka mid ah oo la ciyaaro isbuucii sida dhacdo kale oo dalxiis ah. Xaaladda tartanka Barracuda, taasi waxay ka dhigan tahay in dhacdadani la ciyaaro isbuucii sida WGC Bridgestone Invitational .
Koobka Barracuda waa tartanka kaliya ee jadwalka tartanka PGA si loo isticmaalo habka isbeddelka Stableford . Waxaa loo bedelay habkaas oo laga bilaabo tartanka 2012. Dhamaan tartamada Barracuda, dhibcaha Stableford waxaa la siiyaa ama la kala jaraa sida soo socota:
Gorgortiga labaatanka ah: 8 dhibcood
Eagle: 5 dhibcood
Birdie: 2 dhibcood
Par: 0 dhibcood
Bogey: minus-1 dhibcood
Xagal labixin ama ka xun: ka-yar-3 dhibcood
Goorma: Agosto 2-5
Halkee: Clubka Montreux & Club Country ee Reno, Nev.
Chris Stroud ayaa ku soo baxay kaalinta kowaad ka dib 3 kulan oo uu ka horyimid Greg Owen iyo Richy Werensky. Dhammaantood waxay dhameeyeen 72 godood oo leh 44 dhibcood, sidaas darteed waxay sii wadeen godadka dheeraadka ah. Owen ayaa lagu tirtiray markii ugu horeysay ee uu ciyaaraha ka fariisto, ka dibna Stroud wuxuu ku guuleystay kaalinta labaad. Waxay ahayd guushii ugu horeysay ee PGA Tour ee Stroud.
Greg Chalmers wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu guuleystay PGA Tour adigoo ka dhigaya gorgorkii daloolka ugu dambeeyay. Garsoorahaasi wuxuu kasbaday 5 dhibcood, wuxuuna ka qaaday Stamford Bridge final-kii 42 dhibcood, shan waa uu ka fiican yahay goolhaye Gary Woodland.
Chalmers, 42 jir, waxay heshay koobkii ugu horeeyay ee PGA Tour uu ku bilowday safar 387aad.
Diiwaanka Kooban ee Barracuda:
72 godood: 267 - Vaughn Taylor, 2005
18 godood: 61 - Scott Piercy, 2011
Barashada Barracuda Golf Koorsooyinka:
Tartankan waxaa lagu ciyaari jirey isla golfuureed tan iyo markii la aasaasay: Montreux Golf & Country Club ee Reno.
Barracuda Championship Trivia iyo Notes:
Notah Begay III wuxuu ahaa guuleystihii ugu horeeyay ee Reno-Tahoe Open, 1999, waxaana sidoo kale ahaa guushii ugu horreysay ee PGA Tour ee Begay.
Munaasabaddani waxay leedahay joornaal loogu talagalay soo saarayaasha ugu horreeya ee ku guuleysta. Scott Piercy (2011), Matt Bettancourt (2010), Parker McLachlin (2008), Will Mackenzie (2006), Vaughn Taylor (2004) iyo Chris Riley (2002) ayaa sidoo kale ku guuleystay guushoodii ugu horeysay PGA ee halkan. Sannadkii 2017, Chris Stroud ayaa ku biiray liiska.
Dhanka kale, ugu dambeyntii John Cook's guulaha 11 PGA Tour wuxuu dhacay 2001 2001-dii oo lagu magacaabo Reno-Tahoe Open.
Taylor wuxuu ahaa gabadha kaliya ee laba jeer ku guuleystey Reno-Tahoe Open - waxana uu ku guuleystay sanadihii dambe - illaa JJ Henry wuxuu mar labaad ku guuleystay 2015. Heerka labad ee guusha ayaa labadoodaba yimid Stamford Bridge.
Sanad ka dib markii uu boodbaxay 1999-kii British Open, Jean van de Valde wuxuu ku dhameystay kaalinta labaad ee 2000-dii Reno-Tahoe Open. Taasina waa Van De Velde dhameystiran oo ku saabsan dhacdada "USPGA Tour" oo joogto ah.
Sannad ka hor guushii uu ku gaaray 2009, John Rollins wuxuu ku xirnaa kaalinta labaad ee tartanka 2008.
Michelle Wie ayaa seegay qeybtii tartanka ee 2008. Tani waxay ahayd 13kii jeer ee ugu dambeysay Wie ciyaaray tartan ku saabsan riwaayad rag ah.
Markii Reno-Tahoe Open uu u baddaley gooldhalinta Stableford oo ka bilaabatay tartanka 2012, waxa uu noqday munaasabad labaad oo lagu isticmaalo qaabka buundada ee PGA Tour. International , oo ah tartan ka soo jeeda 1986-2006, waa markii ugu horeysay.
Reno-Tahoe waa furan yahay
2017 - Chris Stroud-p, 44 dhibcood
2016 - Greg Chalmers, 42 dhibcood
2015 - JJ Henry-p, 47 dhibcood
2014 - Geoff Ogilvy, 49 dhibcood
2013 - Gary Woodland, 44 dhibcood
2012 - JJ Henry, 43 dhibcood
2006 - Ma MacKenzie, 268
1999 - Xusay Begay III, 277
1986 Masters: Nicklaus 'Final charge
Guatti-ga Ingiriiska ee Amateur Championship
KPMG tartanka PGA Championship Women's Tournament
2017 Maqaalkii Masters: Sergio Oo Ku Guuleystay Abaalmarin (Ugu dambeyn)
2015 US Open: Taariikh Taariikh ah - Samaynta Jordan Jordan
Ben Hogan waa Record cajiib ah oo ku saabsan tartanka US Open
Inta badan isdaba-joog ah ayaa la sameeyey on Tour PGA
27 Farshaxanka, Dhexdhexaadinta - ama Just Fun - Qodobbo ku saabsan Masters
RBC Heritage Tournament on Tournament PGA
Andrew Johnson Faahfaahinta Xaqiiqda
Liiska Kooxaha Miisaanka Wajiga ah
Sida Loogu Gubo "Dhexgal" (si aad u qaadid, ka saarto)
15 Horyaalka Fikradaha ah ee Hubinaya Inay Hogaaminayaan Madaxda Kulankan Xagaaga
La kulan Shuruudaha Qibrada Shaqo ee MBA
Macluumaadka ku saabsan King Pyrrhus ee Epirus
Nicolas Cage Memes Win guulaha Internetka
Molecules iyo Moles
Farshaxanada Farshaxanka: Talenta iyo Wax-abuurka
Diyaarso Mashiinka Dhirta Cagaaran (WVO) Qaybta 1aad
Farogelinta iyo Diidmada Dugsiyada Sanadka
Farshaxanka Faransiiska - Le Rythme
Gifts-Long Distance Gifts
CSUSM, Cal State San Marcos GPA, Macluumaadka SAT iyo ACT
Waayo-aragnimada Raaxeysiga ee Dammaanadda ah ma ka dheer tahay dadka da'da yar?
Guryaha Bungalow - Sawirrada Hab Dhaqanka Casriga ah ee Casriga ah
Dhismayaasha Aamiin Acid
Top 12 Movies oo ku saabsan Architects
Waqtiga Taariikhda Afrika-Maraykanka: 1890 ilaa 1899
Cagajugleynta by Christopher Morley
Maxay Ardayda Khiyaameeyaan iyo Sida loo Joojiyo
Sidee looga saaraa Jeep Wrangler Hard Top?
10 Talooyin ku saabsan sida Gaas loogu Dhigo Mootada
Foomamka Sare ee Ereyada
Sidee looga jawaabaa su'aasha "Ii sheegi lahayd wax aad ku adagtahay inaad adigu adkaato"
Talooyinka Diyaargarowga Dugsiga Sare ee Talo-bixinta Ganacsiga